कोकाकोला खाएको १ घण्टापछि तपाईको शरीरमा के-के हुन्छ ? हेर्नुहोस ७ तथ्य ! - Sagarmatha Online News Portal
कोकाकोला खाएको १ घण्टापछि तपाईको शरीरमा के-के हुन्छ ? हेर्नुहोस ७ तथ्य !
एजेन्सी । सफ्ट ड्रिंक्ससँग जोडिएको एउटा समाचारले विश्वमा खलबली मच्याएको छ । ब्रिटेनका पूर्व फार्मास्टिक नीरज नाइकले आफ्नो एक ब्लगमा कोल्ड ड्रिंक्स खाएपछि शरीरभित्र हुने प्रभावका बारेमा केही तथ्य सार्वजनिक गरेका छन ।
एक ग्राफिक अध्ययनबाट नाइकले कोल्ड ड्रिंक्सले शरीरको आवश्यक खनिज पदार्थ बाहिर ल्याउँछ र मानिस मानसिक र शारीरिक रुपमा बदलिन थाल्दछ भन्ने तथ्य सार्वजनिक गरेपछि विश्वभर तहल्का मच्चाएको हो । हेरौं कोकाकोला खाएको १ घण्टामा मानिसमा कस्तो परिवर्तन हुन्छ !
१० मिनेटपछि : जब तपाई एउटा कोकाकोला खानुहुन्छ तब तपाईको शरीरमा १० चम्चा चिनी भित्र जान्छ । यो मात्रा २४ भण्टामा लिएको चिनीको मात्रा बराबर हुन्छ । अचानक यति मिठो खाइपछि तपाईलाई बान्ता पनि हुन सक्छ तर त्यसमा मिसीएको फास्टोरिक एसिडका कारण यसो हुँदैन ।
२० मिनेटपछि : कोक खाएको २० मिनेटपछि खाने मानिसको ब्लड सुगर एकदमै बढ्छ । जसका कारण शरीरको लिबरले शरीरमा प्रतिक्रिया गर्छ र माटोपना बढ्न जान्छ ।
४० मिनेटपछि : त्यसपछि उसको शरीरमा क्याफिनको मात्रा छिट्टै बढ्दै जान्छ । अर्कोतर्फ ब्लड प्रेसर पनि बढ्दै जान्छ । जसका कारण तपाईको लिबरले रगतमा अझ बढी चिनीका मात्रा पुर्याउँछ । अनि मस्तिष्कमा रगत जान कम हुन्छ ।
४५ मिनेटपछि : त्यसपछि तपाईको शरीरलाई मादक पदार्थ सेवन गरेको जस्तो लाग्दछ । शरीरले डोपामाइनको उत्पादन बढाउँछ र दिमागको खुसी दिने भाग सक्रिय बनाउँछ ।
६० मिनेछपछि : खाएको १ घण्टापछि ३ प्रक्रिया हुन्छ ।
१. फास्फोरिक एसिडले तपाईको शरीरको भित्रि भागमा क्याल्सियम, मेग्निसियम र जिंकलाई एकस्थानमा जम्मा पार्छ । जसका कराण मेटाबोजिल्म बढ्छ । चिनी र अन्य आर्टि्फिसियल मिठासको बढ्दो मात्राका कारण मेटाबेल्जिक अरु बढ्छ । यसपछि मानिस पिशाब फेर्न जानछन् र केल्सियम बाहिर निक्लिन्छ ।
Published On: २६ असार २०७६, बिहीबार 583पटक हेरिएको